डेढ दर्जन चिकित्सक मुकदर्शक बन्नपर्याे, अनि सदाका लागि विदा भए डा. लव – Health Post Nepal
डेढ दर्जन चिकित्सक मुकदर्शक बन्नपर्याे, अनि सदाका लागि विदा भए डा. लव
२०७७ मंसिर २४ गते १३:४९
नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको आइसियुको दृश्य मंगलबार साँझदेखि नै गर्माएको थियो।
अत्यावश्यक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमात्रै देखिने आइसियुमा अस्पतालका विभिन्न विधाका डेढ दर्जन करिव विशेषज्ञको भीड नै लागेको थियो।
लामो समयसम्म त्यही आइसियुमा मृत्युसँग लडेर बिरामीलाई जीवन दिन तल्लिन मुटुरोग विशेषज्ञ डा. लव जोशी बिरामीको रुपमा थिए।
उनका सहकर्मी भने उनलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउन तल्लिन।
आइसियुमा उपचाररत डा. लवको साँझ ७ बजेतिरबाट रक्तचाप घट्न सुरु भयाे ।
२ घण्टा सबै विज्ञले जानेको र भोगेका अनुभव खन्याएपनि उनलाई बचाउन सकेनन।
अन्ततः ५१ वर्षको कलिलो उमेरमै ख्यातिप्राप्त मुटुरोग विशेषज्ञ डा. जोशी सदाका लागि विदा भए।
‘कतिपय यस्ता रोगका हुन्छन् जसमा चिकित्सक र चिकित्सा विज्ञान निरीह बन्छ’, अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर एवं डा. लवका मिल्ने साथी डा. सुनिलकुमार शर्माले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘केहीबेरमै रोग यति उग्र बनेर आयो कि, हामी मुकदर्शक बनेर प्रिय साथीको अन्तिम श्वासको साक्षी बन्नुप-यो’
डिग्रीका आधारमा मुटुरोग पढेका डा. लव ईच्छा र अनुभवले आइसियुमा पनि उत्तिकै दख्खल राख्थे।
लामो समय काम गरेको ओम अस्पताल होस् या मेडिसिटीको अस्पतालको सुरुवातदेखि नै उनी आइसियु र मुटुरोग विभाग दुबैको नेतृत्वमा थिए।
उनका सहकर्मी डा. शर्माका अनुसार एक/डेढ महिनाअघि देखि नै डा. लवलाई ज्वरो आउने र निको हुने भइरहेको थियो।
बीचमा परीक्षण गर्दा ब्रुसेलेसिस निदान भएको थियो। त्यसको उपचार जारी राखेपनि लक्षण आउने क्रम जारी थियो। तर, जोशीले ब्रुसेलेसिस हो भन्दै थप परीक्षण गराएनन्।
जति बेला थप परीक्षण गराइयो, त्यतिबेला सायद धेरै ढिला भइसकेको थियो।
डा. जोशीको अघिल्लो सोमबार मात्रै सबैभन्दा कडा खालको रक्तक्यान्सर ‘एक्युट माइनोब्ल्याष्टिक ल्युकोमिया एम ४’ भएको पत्ता लाग्यो।
आठ प्रकारका रक्त क्यान्सरमध्ये यो क्यान्सरमा ४० प्रतिशतको मृत्यु उपचार सुरु गरेको केही दिनमै हुन्छ। ‘यो क्यान्सरको उपचारमा २/३ दिनको ढिलाईले पनि धेरै फरक पार्छ’, डा. शर्मा भन्छन्, ‘दिल्लीबाट रिपोर्ट आएर उपचार थाल्दा नै ५/६ दिन भइसकेको थियो’
गत सोमबार उपचार सुरु गरिएकोमा एक हप्तामै भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको चिकित्सक बताउँछन्।
‘सुरुमै लक्षण देखिँदा ब्रुसेलेसिस हो भनेर नबसी परीक्षण, निदान र उपचार भएको भए बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ’, डा. शर्मा सम्झिन्छन्।
आइसियुमा काम गर्दा होस् या मुटु विशेषज्ञका रुपमा डा. जोशीले अथक मेहनत गरेर थुपै बिरामीलाई मृत्युको मुखबाट तानेर फर्काए।
‘कुनै पनि काममा इन्भल्व भएपछि राम्रो नतिजाका लागि लागिरहने उहाँको बानी थियो’, डा. शर्मा सम्झिन्छन्, ‘नेतृत्व क्षमता र डेडिकेसन उहाँका उत्कृष्ट गुण थिए, हामीले धेरै गम्भीर अवस्थाका बिरामी बचायौं ।’
केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइराला गम्भीर बिरामी भएर ओम अस्पतालमा भर्ना भएका समयमा उनलाई बचाउन डा. लवसहितको टीम लागेको डा. शर्मा कहिल्यै भुल्दैनन्।
५१ वर्षअघि पाल्पामा जन्मिएका जोशीले सेन्टजेभियर्स स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा लिएका थिए।
उनले महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसबाट एमबिबिएस र ढाकाबाट कार्डियोलोजीमा एमएस गरेका थिए।
महाराजगञ्जमा पढ्दा उनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमासमेत पुगे।
सेन्टजेभियर्समा डा. जोशीभन्दा एक वर्ष जुनियर भएर पढेका मुटुरोग विशेषज्ञ डा. सुजिवराज भण्डारीको सम्झनामा डा. जोशी कुनै जिम्मेवारी लिन पछि नहट्ने र सो जिम्मेवारी कुसलतापूर्वक पूरा गर्न सक्ने चिकित्सक थिए।
डा. शर्मा वेलायतबाट सर्जरीमा विशेषज्ञ सिध्याएर ढाका जाँदा डा. जोशी ढाकामा पिजी पढ्दै थिए।
काठमाडौं मेडिकल कलेजमा डा. शर्मा र डा. जोशी दुबैका साथी डा. बिरु राणा कार्यरत थिए। राणाकै आग्रहमा सन् २००० मा डा. शर्मा र त्यसको एक वर्षपछि डा. जोशीले काम थाले।
‘मैले केएमसीमा १३ वर्ष काम गरेँ तर, लव भने तीन वर्षमै पूर्णकालिन रुपमा ओम अस्पतालमा काम गर्न थाल्नुभयो।’, डा शर्मा सम्झिन्छन्।
ओम अस्पतालकको आइसियु सेवालाई व्यवस्थित बनाउन डा. जोशीले निकै प्रभावकारी भूमिका खेले। ओममा डा. शर्मा पनि प्राक्टिस गर्थे।
बरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजालका अनुसार ओम अस्पतालमा ती दिनहरुमा डा. लव ओमका खम्बा नै थिए ।
‘कागवेनीदेखि, मुत्तिनाथ र मुगुसम्म स्वास्थ्य शिविर लिएर जाऊँ भन्दा उहाँले कहिल्यै जान्नु भन्नुभएन’ उनले भने ।
कुनै पनि नयाँ काम गर्दा समूहमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने र अरुले गरेका काममा पूर्ण साथ दिने स्वाभाव डा. लवको रहेको डा. रिजाल सम्झन्छन् ।
क्रिटिकल केयर र इन्टेन्सिभिस्ट विधामा नेपालमै पायनीयर मध्ये थिए डा. लव ।
डा. सशांकको उपचारका समयमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डा. सुवास आचार्य ओममै बसेर डा. लवको टीमलाई साथ दिएका थिए ।
सन् २०१७ मा मेडिसिटी खुलेसँगै डा. शर्मा मेडिकल डाइरेक्टरको रुपमा आवद्ध भए।
उनीसँगै डा. लव, डा. रामकुमार घिमिरे, डा. गोपालरमण शर्मा, डा. तोरण केसीलगायतका साथीहरु पनि मेडिसिटीमा जोडिए।
मेडिसिटी अस्पतालको आइसियु सेवालाई व्यवस्थित गर्न उनले निकै महत्वपूर्ण भूमीका खेले।
आइसियु व्यवस्थित भएपछि भने उनले मुटुरोग विभागको प्रमुखको मात्रै जिम्मेवारी हेर्न थाले।
‘कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि नै उहाँ कोभिड टास्कफोर्सको प्रमुख भएर धेरै व्यवस्थित गर्नुभयो’, डा. शर्मा भन्छन्, ‘कोरोना उपचारलाई व्यवस्थित र युनिटलाई डिसिपिलिन बनाउनमा सबैभन्दा बढी भूमिका उहाँको थियो।’
पछिल्लो समय दुईसाता अगाडि मात्रै उनले मेडिसिटी अस्पताल छाडेर पुस १ गतेदेखि स्टार अस्पतालबाट काम सुरु गर्ने सम्झौता गरेका थिए।
नयाँ संस्थाबाट थप बिरामीको जीवन बचाउने डा. जोशीको योजनामा पूर्णबिराम लागेको छ। पछिल्ला दिनमा लगनखेलमा बसोबास गर्ने जोशी परिवारमा डा. जोशीकी श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् ।
डा. लव जोशी